Aqri: Maxaad ka taqaanaa guddoomiyaha cusub ee maxkamada sare ee dalka? - Caasimada Online
Home Warar Aqri: Maxaad ka taqaanaa guddoomiyaha cusub ee maxkamada sare ee dalka?
Aqri: Maxaad ka taqaanaa guddoomiyaha cusub ee maxkamada sare ee dalka?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyaha Maxakamadda Sare ee dalka, Mudane Ibraahim Iidle Suleymaan, waxaa uuna xilkaas u magacaabay Garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed.
Haddaba maxaa ka taqaanaa Tariikhda Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda Sare?
Garyaqaan Baashe waxa uu hore usoo noqday La-taliye sharci, Bare Jaamacad, qareen iyo cilmi baare sharci. Muddo 10 sano ka badan ayuu kusoo jiray hawlaha garsoorka iyo talo-bixinta sharciga.